Siyaad Muxumed Cumar: "Waxaan ka baxay Jaamacadda BBC " - BBC News Somali
Siyaad Muxumed Cumar: "Waxaan ka baxay Jaamacadda BBC "
Siyaad Muxumed Cumar oo laanta Afka Soomaaliga ee BBC dhgeysanayay 49 sano
Laanta afka Soomaaliga ee BBC waxay soo jirtay in ka badan 60 sano.
Waxaa la furay sanadka markuu ahaa 1957-dii.
Maxaa ka mid waxyaabaha uu ka korarsady?
Siyaad Muxumed Cumar ayaa sheegay in isaga oo aan wax qorin waxna akhrin haddana dad aqoonyahanno ah ay taariikhaha iyo wararka caalamka wax ka waydiiyaan taasi oo uu ku micneeyay inay tahay Jaamacadda BBC oo uu ka baxay.
"Nooc jaamacad oo kale ah ayaan kaga baxay, anigoo wax akhrin waxna qorin, waxaa dhacda in waxyaabo bari hore dhacay oo la iga codsado inaan sheego cidda waagaas waddankaas madaxwayne ka ahayd oo waagaas yaa Qaramada Midoobey wax ka ahaa in ay wax iga waydiiyaan baa laga yaabaa dad mutacallimiin ah marka jaamacad baan ka soo baxay baa la oran karaa" ayu yiri Mr Siyaad.
Maxaa ka mid ah barnaamijyadii uu xiisayn jiray?
Siyaad Muxumed Cumar ayaa sheegay in muddada 49 sano ah ee uu dhageysanaayay BBC ay jireen barnaamijyo uu si gaar ah u jeclaa.
"Barnaamijyada aan aadka u xiisayn jiray waxaa ka mid ah,barnaamij la oran jiray waydiin iyo warcelin,Qubanaha Talaadada,toddobaadka iyo Afrika iyo dunida carabta ayaa ka mid ah barnaamijyada aan aadka u jeclaa waagaas",ayuu yiri.
BBC oo raadineyso xiddiga ugu wanaagsan saxaafadda Afrika
Barnaamijka baafinta ee BBC oo isu keenay dad is dhalay oo is la'aa
Siyaad Muxumed Cumar
Kalsoonida ay dadka ku qabaan BBC.
Siyaad Muxumed Cumar ayaa sheegay in dadka Soomaalida ah ay si aad ah ugu kalsoon yihiin wararka ay tebiso laanta afka soomaaliga ee BBC.
Waxa uu intaa ku daray in muddadii ka badnayd 60 sano ee ay BBC jirtay ay ahayd isha kali ah ee laga heli karo warar lagu kalsoonaan karo.
"Soomaalida waxaan u malaynayaa in muddo imika 60 sano ah isha kali ah ee ay dadku ku kalsoon yihiin waa BBC" ayuu yiri Mr Siyaad.
Siyaad Muxumed Cumar ayaa sheegay in dhageysiga BBC lanta Afka Soomaaliga ay u saamaxday in uu wax badan ka ogaado caalamka.